Izingubo Ezi-4 Ezesabekayo Ezivela Embukisweni Wentwasahlobo kaPeter Som wokuthi Ngiyathemba Zizovela Ngomlingo Eqoqweni Lakhe elizayo likaKohl - Isitayela
Izingubo Ezi-4 Ezesabekayo Ezivela Embukisweni Wentwasahlobo kaPeter Som wokuthi Ngiyathemba Zizovela Ngomlingo Eqoqweni Lakhe elizayo likaKohl
KULUNGILE, KULUNGILE. Ngiyazi ukuthi lapho abaklami besebenzisana nabathengisi, empeleni abenzi izingcezu eziqondile zezingcezu ezivela emaqoqweni abo omgwaqo. Kepha namhlanje njengoba ngibuke isembatho ngemuva kwengubo enhle yehla emgwaqeni embukisweni kaPeter Som entwasahlobo ka-2014, ngithole ukuthi ngifisa ukuthi yilokho kanye okuzokwenzeka ngonyaka ozayo lapho umqambi ekhipha iqoqo lakhe leKohl's DesigNation.
Kungani? Ngoba iqoqo lonke le-'espl-meets-downtown 'uPeter Som ukhombisile namhlanje ukuthi beluyinto esizofuna ukuyigqoka lapho isimo sezulu sifudumala futhi entwasahlobo ezayo. Futhi ngoba sizofuna ngokuphelele konke , bekungeke yini kusimangaze uma konke bekungabizwa ngentengo efanayo ku- $ 36 kuya ku- $ 88 range ukuthi iqoqo likaKohl lizoba yini?
Yize ngineqiniso lokuthi iqoqo likaPeter Som lokuqoqwa kukaKohl lizofiseleka ngokwalo, nazi izingubo ezine ezincane ezivela kulayini omkhulu kaSom engifisa sengathi zingavela ngomlingo ekusebenzisaneni kule ntwasahlobo. Hheyi, intombazane ingaphupha.
Yikuphi okuthandayo? Ngabe ujabulile ngokusebenzisana kukaPeter Som's Kohl njengami?
Izithombe ngezilokotho zikaPeter Som / KCD
kungani icamila ishiye ukuzwana kwesihlanu
izindebe ezincane 1 isirinji ye-juvederm ngaphambi nangemva
ingabe ukususwa kwezinwele laser kugcina